China Ọdụdọ teepu, combustion na-akwado teepu, ịkwanyere teepu, mkpuchi teepu factory na-emepụta | Boda
Teepu eletriki, ma obu Electricalkwanyere ọkụ eletriki mkpuchi adhesive teepu, nke a makwaara dị ka ihe mkpuchi eletriki eletriki ma ọ bụ mkpuchi mkpuchi. Enwere ike ịkọbiri ya: PVC teepu eletriki, PVC teepu na na. Teepu eletriki nwere mkpuchi dị mma, nguzogide ire ọkụ, nkwụsi ike voltage, nguzo oyi na njirimara ndị ọzọ. Ọ bụ n'ozuzu kwesịrị ekwesị n'ihi na waya asọfe, mkpuchi na fixation nke iche iche iche iche nke moto na electronic akụkụ dị ka transformer, moto, capacitor, voltaji regulator, wdg Ọdụdọ teepu nwere ọbara ọbara, odo, acha anụnụ anụnụ, ọcha, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nwa, uzo na ndị ọzọ na agba. Kedu ihe bụ teepu eletriki na ihe eji ya eme?
Usoro mmepụta nke teepu eletriki:
Ọ na-tumadi dabere na ịse film na mgbe ahụ ntekwasa na roba mgbali mwute nrapado.
Nzube nke teepu eletriki:
Ọ na-adịkarị mma maka mkpuchi nke akụkụ dị iche iche na-eguzogide. Dịka ọmụmaatụ, njikọta ikuku waya, mmebi mmebi mkpuchi, ntụgharị, moto, capacitor, voltage regulator na ụdị moto ndị ọzọ, akụkụ elektrọnik nke ọrụ mkpuchi mkpuchi. N'otu oge ahụ, enwere ike iji ya maka ijikọ, idozi, ịkwa akwa, imezi, ịka akara na ichebe n'usoro mmepụta ihe.
Ọdụdọ teepu atụmatụ:
Teepu eletriki na-ezo aka na teepu nke ndị ọkụ eletrik na-eji egbochi mgbochi eletrik na mkpuchi. Ọ nwere arụmọrụ mkpuchi dị mma, ọkụ ọkụ, nguzogide ọkụ dị elu, nguzogide okpomọkụ dị elu, mgbatị siri ike, dị mfe ịdọka, dị mfe ịpịgharị, nnukwu ọkụ ọkụ, ezigbo ihu igwe na ihe ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ntinye nke teepu eletrik dịkwa oke oke. Enwere ike iji ya maka mkpuchi nke eriri na njikọ eriri n'okpuru 70 Celsius C, njirimara agba, nchedo n'ọbọ, ihe nkedo nkedo, wdg.
Jiri na nchekwa nke teepu eletriki:
Mgbe anyị na-eji teepu eletriki, anyị ga-ejikọ ya na ọkara overlap. Nke a bụ ime ka ikuku na -ejiji na idiocha, a ga-etinyekwa esemokwu zuru oke. Ọzọkwa, na nkwonkwo njikọ yiri nke ahụ, a ga-etinye teepu eletriki ahụ na njedebe nke waya ahụ, wee tụgharịa azụ iji hapụ mpempe akwụkwọ roba, iji gbochie ịkpụchasị. Mgbe ị na-ekechi akwa ikpeazụ nke teepu eletriki, ọ gaghị agbatị iji zere ịdọrọ ọkọlọtọ. Iji mee ka arụmọrụ ya kwụsie ike, teepu eletriki kwesịrị ịchekwa na ọnọdụ okpomọkụ na ọnọdụ ikuku.
BOSENDA teepu eletriki, nke ejiri ihe eji eme klas mbụ, nwere ezigbo mma na ibu ibu. Ọ dị iche na teepu eletrik nkịtị nke ahịa, nke viscosity ezughị, na nzaghachi mgbe ejiri ya adịghị mma. A nwalere teepu anyị, bido na nhọrọ nke akụrụngwa, mmepụta nke njikọ ọ bụla, na-achịkwa ya. Jide n'aka na onye ahịa ahụ nwere afọ ojuju mgbe ọ natara. Ndị ahịa sitere na Middle Est, Eastern Europe, South America na mba EU.
Nke gara aga: Angle grinder, mmetụta dakpuo, hama, li-ion malite ịgba, ike ngwaọrụ
Osote: Ịgbado ọkụ igwe, DC ịgbado ọkụ igwe, AC ịgbado ọkụ igwe, ịgbado ọkụ nkpuchi, ịgbado ọkụ ngwa
Ọdụdọ ịkwanyere Mezie